राष्ट्रिय महिला फुटबल लिग सुरु, मध्यपश्चिमको पोष्टमा पुलिसको १३ गोल
२०७३ बैशाख ७ मंगलबार, काठमाडौं । राष्ट्रिय महिला फुटबल लिग सुरु भएको छ । सातदोबाटोस्थित एन्फा टेक्निकल मैदानमा मंगलबारबाट सुरु भएको राष्ट्रिय महिला फुटबल लिगको पहिलो खेलमा नेपाल महिला पुलिसले मध्यपश्चिमाञ्चलविरुद्ध गोल वर्षा गरेको छ । मध्यपश्चिमको पोष्टमा पुलिसले १३ गरेको हो । मध्यपश्चिमले भने गोल फर्काउन सकेन । पुलिसका लागि नवौैं मिनेटमा निरु थापाले गोल गर्दै पुलिसलाई अग्रता दिलाइन् । उनले २४औं मिनेटमा आफ्नो ह्याट्रिक पुरा गरेको थिइन् । पुलिसका लागि अर ... बाँकी अंश»
इङ्गलिश प्रिमियर लिग : टोटनह्यामको उपाधि दावेदारी कायमै
२०७३ बैशाख ७ मंगलबार, एजेन्सी । इङ्गलिश प्रिमियर लिग फुटबलमा दोस्रो स्थानको टोटनह्याम हट्सपरले उपाधि दावेदारी कायमै राखेको छ । सोमबार राति स्टोक सिटीको घरेलु मैदानमा भएको खेलमा ४–० को फराकिलो जित निकाल्दै टोटनह्यामले उपाधि दावेदारीलाई जिवित राखेको हो । टोटनह्यामलाई जिताउन ह्यारी केन र डेल अलीले समान २–२ गोल गरे । जितसंगै टोटनह्यामले शीर्ष स्थानको लेस्टर सिटीसंग अंक दूरी कम गरेको छ । टोटनह्यामको लेस्टरसंग ५ अंक कम छ । लेस्टरको समान ३४ खेलबाट ७३ अंक छ । तेस्रो र ... बाँकी अंश»
नेपाली क्रिकेट टोली ब्यवस्थापक 'राजु' को हुन् ?
२०७३ बैशाख ७ मंगलबार, काठमाडौं। नामिबिया बिरुद्ध विश्व क्रिकेट लीगमा नेपाली टोलीका म्यानेजर भेंकटपति राजु थिए। आईसीसीले सम्हालेको प्रतियोगितामा नेपाली टोली सम्हाल्ने जिम्मेवारी पनि आईसीसीले नै लिएको थियो। नेपाली टोलीका प्रशिक्षक जगत टमाटा भए पनि परामर्शदाता प्रशिक्षक भनेर आईसीसीले नेपालका पुर्व प्रशिक्षक पुबुदु दाशानाएकेलाई नेपाली टोली हेर्ने जिम्मा दिएको थियो। त्यसैगरि आइसीसीले टिम म्यानेजरका रुपमा पनि भारतिय पुर्व खेलाडी भेंकटपति राजुलाई नियुक्त ... बाँकी अंश»
मदन मेमोरियल फुटबलको उपाधी चम्किलोको पोल्टामा
२०७३ बैशाख ७ मंगलबार, तेह्रथुम। तेह्रथुम आठराईको सक्रान्तिबजारमा लाग्दै आएको मदन मेलाको अवसरमा आयोजित मदन मेमोरियल नकआउट पुरुष फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि घरेलु टिम चम्किलो तारा युवा क्लब ईवा तेह्रथुमले हाते पारेको छ। सोमबार सक्रान्तिबजारस्थित त्रिमोहन उच्च माविको खेलमैदानमा भएको फाइनल खेलमा खाम्लालुङ गाविस सेतोलाई १ का विरुद्ध २ गोलले पराजित गर्दै चम्किलोले उपाधि चुमेको हो। उपाधिसँगै प्रतियोगिताको यो संस्करणको विजेता बनेको चम्किलो तारा युवा क्लबले नगद ... बाँकी अंश»
आईपीएल: मुम्बईलाई हराउँदै हैदरावादले जीतको खाता खोल्यो
२०७३ बैशाख ६ सोमबार, काठमाडौं। सनराईजर्स हैदरावादले मुम्बई ईण्डियन्सलाई ७ विकेटले पराजित गर्दै जीतको खाता खोलेको छ। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेकोमुम्बईले निर्धारित २० ओभरमा ६ विकेट गुमाउँदै १४२ रन बनाएको थियो। अम्बती रायडुले ५४ रन बनाएका थिए भने क्रुनाल पाण्ड्याले ४९* रनको योगदान गरेका थिए। वेष्टईण्डिजका केरन पोलार्डको ठाउँमा आफ्नो पहिलो आईपीएल खेल खेलिरहेका न्युजिल्याण्डका मार्टिन गुपटिल २ रनमा आउट भएका थिए। हैदरावादका बरिन्दर श्रनले ३ विकेट लिए ... बाँकी अंश»
'क्रिकेट प्रशंसकहरुलाई धन्यवाद', नेपाली टोलीलाई उत्साह दिनपुगेका समर्थक
२०७३ बैशाख ६ सोमबार, काठमाडौं। नेपालले लगातार दुई खेलमा नामिबियालाई हराउँदै विश्व क्रिकेट लीग च्याम्पियनशीपमा आफ्नो अंक तालिकामा सुधार गर्दै पाँचौं स्थानमा उक्लेको छ। नेपालको जीतकालागि नेपाली खेलाडीहरुको प्रदर्शनले महत्वपुर्ण भुमिका खेलको हो। ... बाँकी अंश»
क्रिकेट जित्ने खेलाडीलाई क–कसले दिए बधाई ?
२०७३ बैशाख ६ सोमबार, काठमाडौं। नेपालको घरेलु मैदानमा भएको आइसीसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपको दोस्रो खेलमा पनि विजय हासिल गर्ने नेपाली खेलाडीहरूलाई सरकार प्रमुख देखि शीर्ष नेताहरुलगायतले बधाई दिएका छन्। रोमान्चक मोडमा पुगेर तीन विकेटको विजय हासिल गर्न सफल नेपाली क्रिकेट टोलीलाई नेपालका कार्यकारी प्रमुख देखि सामान्य नागरिकसम्मले आ–आफ्नो पहुँचमा रहेको माध्यमबाट बधाई तथा शुभकामना दिएका हुन्। खेल सुरु हुन भन्दा पहिले नै कीर्तिपुर खेल मैदान पुगेर खे ... बाँकी अंश»
पारसले भने, ‘अब राम्रो गर्न नेदरल्याण्ड्ससंग खेल्नु अघि क्यान लफडा टुंगिनु पर्‍याे’
२०७३ बैशाख ६ सोमबार, काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान पारस खड्काले यो जितले निकै खुसी भएको बताएका छन् । नामिवियाविरुद्धको विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपको दोस्रो खेल जितेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पारसले आफुले बनाएको शतक भन्दा पनि जित पहिलो कुरा हो–भने । सजिलै जित्न सकिने खेल किन यस्तो भो ? भन्ने संचारकर्मीको प्रश्नमा कप्तान पारसले भने, ‘खेलमा यस्तै हो ।’ उनले २ सय ४० रनको चुनौलाई सजिलै जित्छौं भन्ने आँकलन गरेपनि त्यसो हुन नसकेको बताए । ... बाँकी अंश»
नामिवियाविरुद्ध नेपालको रोमाञ्चक जित, घरेलु मैदानमा भएका दुबै खेल कब्जा
२०७३ बैशाख ६ सोमबार, काठमाडौं । नामिवियाविरुद्धको विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपको दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपालले रोमान्चक जित हासिल गरेको छ । २ सय ४० रनको कठिन चुनौती पछ्याएको नेपालले नामिवियालाई १ बल खेल्न बाँकी छँदा ७ विकेट गुमाएर ३ विकेटले पराजित गर्दै रोमान्चक जित हासिल गरेको हो । नेपाललाई अन्तिम २ बलमा १ रन आवश्यक रहेकामा शरद भेषावकरले चौका प्रहार गरेर जित सुनिश्चित गरेका हुन् । नेपालका लागि कप्तान पासर खड्काले शानदार सतक बनाए । उनले ९४ बलमा ... बाँकी अंश»
फिल्डिङको दबाब फर्काए पारसले, छक्का–चौकाको वर्षापछि तातीयो कीर्तिपुर
२०७३ बैशाख ६ सोमबार, काठमाडौं । फिल्डिङमा क्याच फुत्काएपछि दबाब खेपेका नेपाली क्रिकेट टोलीका कप्तान पारस खड्काले छक्का चौकाको वर्षा गरेपछि कीर्तिपुर मैदान एका एक तातीयो । नेपालको २ विकेट पतनपछि क्रिजमा प्रवेश गरेका कप्तान पारसले आफ्नो सुरुकै पाँच लबभित्रै छक्का प्रहार गरेर उर्जा दिए । लतत्तै अर्को बलमा उनले चौका प्रहार गरे । दर्शक उत्साही भए । खेल सनसनीपूर्ण बन्यो । ओपनिङ जोडी नरेश बुढाऐर र ज्ञानेन्द्र मल्ल आउट भएपछि पारस मैदान छिरे । नरेश आउट भएपछि मैदान छिर ... बाँकी अंश»
नेपाल नामिविया क्रिकेट : नेपाल ३ विकेटले विजयी (लाइभ अपडेट)
२०७३ बैशाख ६ सोमबार, नामिवियाविरुद्धको विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपको दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपालले संघर्षपूर्ण जित हासिल गरेको छ । २ सय ४० रनको कठिन चुनौती पछ्याएको नेपालले नामिवियालाई १ बल खेल्न बाँकी छँदा ७ विकेट गुमाएर ३ विकेटले पराजित गर्दै रोमान्चक जित हासिल गरेको हो । नेपाललाई अन्तिम २ बलमा १ रन आवश्यक रहेकामा शरद भेषावकरले चौका प्रहार गरेर जित सुनिश्चित गरेका हुन् । नेपाललाई जितका लागि ३ बलमा २ रन आवश्यक । 16:54:11 सोमपाल १ रन बनाएर आउ ... बाँकी अंश»
नेपाललाई नामिवियाको २४० रनको चुनौती
२०७३ बैशाख ६ सोमबार, काठमाडौं । नामिवियाले नेपाल सामु दुई सय ४० रनको चुनौती पेश गरेको छ । कीर्तिपुर मैदानमा जारी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप अन्तर्गत दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा टस हारेर पहिले व्याटिङ गरेको नाविवियाले निर्धारित ५० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर दुई सउ ३९ रन बनायो । नेपालले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि जामिवियाले पहिले व्याटिङ गरेको हो । नामवियाको सय रन पुग्नु अघिमात्रै नपाले १ विकेट हासिल गरेको थियो । नामिवियाका लागि कप्तान स्टेफन बार्ड र किपर ज ... बाँकी अंश»
‘बसन्तले ल्याए वहार, कीर्तिपुरमा गुन्जीयो नेपाल नेपाल’
२०७३ बैशाख ६ सोमबार, काठमाडौं । नामिवियाविरुद्धको विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपको दोस्रो एक दिवसीयमा पनि बाँया हाते स्पिनर बसन्त रेग्मीले २ विकेट लिएर खेलमा बसन्तको वहार ल्याइदिए । ऋतुको कुरा गर्दा समेत वैशाख महिनाको जारी पहिलो साताबीच कीर्तिपुर मैदानमा खेल भएको छ । यसअघि शनिबार नामिवियाविरुद्ध घरेलु मैदानमा बसन्तले ३ विकेट चट्काएका थिए । दोस्रो खेलमा उनले नामिवियाका किपर जेन ग्रिन र गिर्रेइ स्न्यमानलाई एलबिडब्लुको सिकार बनाए । कप्तान स्टेफन बार्डस ... बाँकी अंश»
आशाका सन्दीपले ल्याए उत्साह, साथमा २ मेडन
२०७३ बैशाख ६ सोमबार, काठमाडौं । नामिवियासंगको दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपाल बलिङ दबाबमै रहेका बेला यु–१९ तारा सन्दीप लामिछानेले विकेट लिँदै दबाब केही कम गरे । उनले नेपाललाई विकेट लिएर पहिलो सफलता दिलाए । नामिवियाविरुद्धको विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपको पहिलो एक दिवसीयबाट डेब्यु गरेका उनले करियरको आफ्नो दोस्रो खेलमा पहिलो ओभर बलिङ गर्दा विना कुनै रन एक मेडन राखे । उनले अर्को ओरभमा पनि १ मेडन गरी दुई मेडन राखेका छन् । उनले अर्धशतक पूरा गरेका नामिव ... बाँकी अंश»
नेपाल-नामिविया क्रिकेट : नेपाललाई नामिवियाको २४० रनको चुनौती (अपडेट)
२०७३ बैशाख ६ सोमबार, काठमाडौं । नामिवियाले नेपाल सामु दुई सय ४० रनको चुनौती पेश गरेको छ । कीर्तिपुर मैदानमा जारी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप अन्तर्गत दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा टस हारेर पहिले व्याटिङ गरेको नाविवियाले निर्धारित ५० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर दुई सउ ३९ रन बनायो । नेपालले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि जामिवियाले पहिले व्याटिङ गरेको हो । नामवियाको सय रन पुग्नु अघिमात्रै नपाले १ विकेट हासिल गरेको थियो । नामिविया इनिङ सकियो । नेपाललाई नामिवियाको २४० ... बाँकी अंश»
क्रिकेटले खुदे्र व्यापारीलाई भ्याई नभ्याई
२०७३ बैशाख ६ सोमबार, काठमाडौं। नेपाल र नामिवियाबीचको विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपको दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेट भइरहेको कीर्तिपुर मैदान आसपासमा खुद्रे व्यापारले प्राथमिकता पाएको छ। बाटोमा ड्राइ फुड र पानी विक्रि गर्नेको लस्कर छ। बाटो छेउछाउ फलफुल र आइसक्रिम विक्रि गर्नेका ढेला र साइकल पनि छन् । नेपालको झण्डा अंकित स्टिकर समेत विक्रिमा छन् । कतिपयले नेपाली क्रिकेटप्रति सहानुभुति राखेर रोजिरोटीलाई पनि ध्यान दिएका छन् । पानी पूरी, चटपटेका ठेला पनि संगै छन् । ... बाँकी अंश»
खेलाडीको हौसला बढाउन प्रधानमन्त्री ओली पुगे कीर्तिपुर
२०७३ बैशाख ६ सोमबार, काठमाडौं । नेपाल र नामिवियाबीचको विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपको दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेट कीर्तिपुर मैदानमा सुरु भएको छ । खेलाडीहरुको हौसला बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कीर्तिपुर मैदान पुगेका छन् । ओलीले खेलाडीहरुसंग हात मिलाउँदै विजयका लागि शुभकामना दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले क्रिकेटलाई दिएको महत्वले सरकार नेपाली खेलकुदको विकासका लागि गम्भीर छ भन्ने सन्देश दिएको छ । यसअघि, तत्कालिन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले एक निर्व ... बाँकी अंश»
नेपाल–नामिविया क्रिकेट : नेपालले टस जितेर फिल्डिङ रोज्यो
२०७३ बैशाख ६ सोमबार, काठमाडौं । नेपाल र नामिवियाबीचको विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपको दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेट कीर्तिपुर मैदानमा सुरु भएकाे छ । नेपालले टस जितेर फिल्डिङ रोजेको छ । नेपालले फिल्डिङ रोजेपछि नामिवियाले पहिले व्याटिङको निम्तो पाएको छ । नामिवियाको तर्फबाट कप्तान स्टेफेन बार्ड ओपनिङ गर्दै छन् । सोमपाल कामीले पहिलो ओभर बलिङ गरिरहेका छन् । यु–१९ कप्तान राजु रिजाल विश्राममा छन् । राजुको ठाउँमा अलराउण्डर सागर पुनले खेल्ने छन् । यसअघि, सागर शनिबा ... बाँकी अंश»
एथ्लेटिको मड्रिडको टक्कर, बार्सिलोना यात्रा कष्टपूर्ण
२०७३ बैशाख ६ सोमबार, एजेन्सी । स्पेनिश लिग ला लिगा फुटबलमा ग्रनाडालाई हराउँदै एथ्लेटिको मड्रिड दास्रो स्थानमा उक्लिएको छ । आइतबार राति घरेलु मैदानमा भएको खेलमा एथ्लेटिको ३–० ले विजयी भयो । एथ्लेटिकोलाई विजयी गराउन कोके, फर्नान्डो टोरेस र एन्जल कोरियाले एक–एक गोल गरे । यो जितसंगै एथ्लेटिकोले शीर्ष स्थानको बार्सिलोनासंग अंक बराबरी गर्दै उपाधि होड बलियो बनाएको छ । एथ्लेटिकोले अंक बराबरी गरेसंगै बार्सिलोनको यात्रा कष्टपूर्ण भएको छ । दुवैको समान ३३ खेलबाट ७६ अं ... बाँकी अंश»
ला लिगाको त्रिपक्षीय उपाधि होड रोचक, बार्सिलोनाले १३ वर्ष पछि लगातार ३ खेल गुमायो
२०७३ बैशाख ६ सोमबार, एजेन्सी । स्पेनिश ला लिगा फुटबलमा शीर्ष स्थानको बार्सिलोनालाई फेरि धक्का लागेको छ । बार्सिलोनाले पछिल्ला ३ खेल गुमाएपछि धक्का लागेको हो । सन् २००३ यता बार्सिलोनाले लिगमा लगातार तीन खेल हारेको यो पहिलो पटक हो । आइतबार राति बार्सा घरेलु मैदान नउ क्याम्पमै २–१ ले पराजित भयो । भ्यालेन्सियाले खेलको २६ औं मिनेटमै गोल गरेर दबाब सिर्जना गरेको थियो । भ्यालेन्सियाका लागि पहिलो गोल इभाँ राकिटिचले गरे । यस्तै, पहिलो हाफको अन्तिम समयमा सान्टी मिनाल ... बाँकी अंश»